Uhlalutyo lulufumana njani lonke olo lwazi? | Martech Zone
Ngaba i-Analytics ilufumana njani lonke olo lwazi?
NgeCawa, ngoMatshi 29, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kule mpelaveki benditshona (njengesiqhelo). Ngaba ngekhe kulunge ukuba unokuvula iGoogle Analytics kwaye ubone ukuba bangaphi abantu abafunda i-RSS feed yakho? Emva kwayo yonke loo nto, oku kusandwendwela indawo yakho kunye nomxholo wakho, akunjalo? Ingxaki, ewe, kukuba i-RSS feeds ayivumeli ikhowudi ukuba yenziwe xa umxholo wakho uvula (uhlobo). Iphepha lakho lewebhu liyenza, nangona kunjalo.
Ukuba ungathanda ukufunda ngakumbi ngeWebhu yokuHlola, ndingacebisa incwadi enye kunye nencwadi enye kuphela, UAvinash Kaushik ncwadi, Uhlalutyo lweWebhu ngeYure ngosuku. I-Avinash icacisa gca ukuba kutheni sisuka kwicala leseva kubahlalutyi kwicala labathengi kubahlalutyi kunye nemiceli mngeni nganye.
Nantsi isampulu yesicelo somfanekiso kunye nokubuza okuguqukayo:
I-douglas% 2520karr% 2520shiny% 2520 izinto% 3B
Ndizamile ukuqokelela zonke izinto eziguqukayo zokubuza ngophando lweqela ezahlukeneyo kwiwebhusayithi:
utmac = "Inombolo yeAkhawunti"
utmcc = "Iicookies"
utmdt = "Iphepha lesihloko"
utmfl = "Uhlobo lweFlash"
utmhn = "Cela igama lenginginya"
utmn = "Inombolo engahleliwe-yenziwe nganye __utm.gif hit kwaye isetyenziselwa ukuthintela i-caching ye-gif hit"
utmp = "Iphepha-isicelo sephepha kunye neeparitha zombuzo"
utmr = "Umthombo ekubhekiswa kuwo (ugqithiso lwe-url | - | 0)"
utmsr = "Isisombululo seScreen"
utmul = "Ulwimi (lang | lang-CO | -)"
utmwv = "UTM uguqulelo"
utmctm = Indlela yeMkhankaso (0 | 1)
utmcto = Ixesha lokuphela komkhankaso
utmctr = Ixesha lokuKhangela
utmcmd = Iphulo eliPhakathi (ngqo), (organic), (nanye)
utmcsr = Umthombo wePhulo
utmcct = Umxholo wePhulo
Andiqinisekanga ngezi zinto… kwaye andazi ukuba zininzi, kodwa ezi ziluncedo kakhulu ukuba ufuna ukuqokelela kunye isicelo sakho sokubhalisa idatha eyongezelelweyo kwiakhawunti yakho kaGoogle yoHlahlo-umzekelo ... Ababhalisi bakho beRSS!
Namhlanje ndivavanya ithiyori yam ... Ndivelise isicelo somfanekiso sokuba kufanele kudlula ukusetyenziswa kwe-RSS kuGoogle Analytics. Umceli mngeni kunjalo, kuba akukho khukhi okanye isikhombisi sesicelo esithile. Umrhumo nako vula ukutya okufanayo kwaye ubhalise ii-hits ezininzi kwiGoogle Analytics. Ndiza kuqhubeka nokukhupha, nangona kunjalo, kwaye ndibone ukuba andinakuza nento enamandla ngakumbi.
Nasi isicelo sam somfanekiso… ndisebenzisa Iplagi yePostPress yeWordPress Ndiphuhlisile kwaye ndibeka ikhowudi emva komxholo wesondlo:
Inqaku elinye, oku kuya kulinganisa ukubetha, hayi ababhalisi! Ukuba ufuna ukuzama ukulinganisa abaBhalisi, ndingacebisa umcimbi we-onclick kwi icon yakho ye-RSS. Ewe kunjalo, uphoswa nawuphina umntu obhalisileyo ngokusebenzisa ulwazi lekhonkco kwintloko yakho… ngenxa yoko andizami nokuzama. Ukuba uneengcinga ezithile ngento endiyenzayo okanye indlela enokuphuculwa ngayo, ndixelele!
tags: ukusebenzaXhasa i-pinterestamaxabiso esongezo-kwinqwelo-mafuthaushicilelo
Mar 29, 2009 ngo 5:22 PM
Ngaba ubungasebenzisa i-feedburner.com? Kuba uGoogle uyithengile izibalo ziya kudityaniswa neGoogle Analytics kungekudala… kulo nyaka ndiyathemba!
Mar 29, 2009 ngo 5:38 PM
Ewe, ndisebenzisa i-Feedburner ngoku ukulinganisa ukufikelela kwam kwiifidi. Nangona kunjalo, andikuthandi ukulibaziseka kokupapasha kwi-Feedburner kwaye ndiyithiyile ngokunyanisekileyo i-analytics kuyo kunye nendlela ebonisa ngayo ukukhula kunye nokusetyenziswa.
Khange ndive ukuba bajonge ekutsaleni izibalo zeFeedburner kuGoogle Analytics - kodwa iya kuba yinto entle leyo!
Gcina iposti yam!
Mar 29, 2009 ngo 9:43 PM
Andinokothuka ukuba i-GA idibanisa oku kwixesha elizayo ... isengqiqweni kuphela kuba uGoogle engumnini weFeedburner ... kwaye ndiqinisekile ukuba awungomntu wokuqala ukuzama oku.
Mar 30, 2009 ngo 12:59 PM
Oku akophuli nayiphi na imiqathango yokusetyenziswa akunjalo? Ndiya kucaphukela ukufumanisa ukuba ndivaliwe kwi-Google Analytics ngokusebenzisa iiseva zabo ngendlela engekho-standard (okt kwizicelo ze-Img).
Kwakhona ukuba batshintsha i-API yabo (okt ulandelelwano lweparameters, inani leparameters, njalo-njalo, iya kwaphuka ekunene)
Kungcono ukwenza oku nge-akhawunti yovavanyo!
NgoJulayi 6, 2009 ngo-12:15 PM